पत्रकारले आफ्नो कामको समीक्षा गर्ने बेला आएको छ – Janaubhar
पत्रकारले आफ्नो कामको समीक्षा गर्ने बेला आएको छ
प्रकाशित मितिः बिहिबार, भदौ २२, २०७४ | 323 Views ||
नेपाल पत्रकार महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले पत्रकारले समाजमा विश्वसनीय छवि बनाउनुपर्ने बताउँछन् । अहिले पत्रकारहरुप्रति समाजको दृष्टिकोण बदलिएको उनको भनाई छ । पत्रकार महासंघको गतिविधि, आगामी नीति, पत्रकारहरुका समस्या लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर आचार्यसँग नौलो जनउभार साप्ताहिकका सह–सम्पादक पाण्डव शर्माले गरेको कुराकानी । –सम्पादक्
नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ । महासंघलाई अब कसरी अगाडी लैजानुहुन्छ ?
पत्रकार महासंघ भनेको पत्रकारहरुको हक अधिकार संरक्षण र पेशागत सुरक्षाका लागि बनेको संस्था हो । पत्रकार महासंघ स्थापनाकालदेखि नै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा लड्दै आएको छ ।
अहिले पनि हाम्रो मूल दायित्व भनेको नै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टीका लागि पहल गर्ने नै हो । पत्रकार महासंघले नागरिक हक, लोकतन्त्रको रक्षा, मुलुकको समृद्धिलगायत समग्र राष्ट्र र नागरिकको पक्षमा काम गर्नेछ । अन्य केही प्राविधिक विषयहरु पनि समेट्नुपर्ने छ ।
निर्वाचनमा एउटा पक्ष पराजित भएको छ । पराजित पक्षलाई कसरी समेट्नुहुन्छ ?
तपाईले भनेजस्तो पत्रकार महासंघमा कोही पनि पराजित भएको छैन । लोकतन्त्रमा निर्वाचन स्वभाविक प्रकृया हो । पत्रकार महासंघमा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको हो । निर्वाचन भइसकेपछि कोही विजयी हुनु र कोही हुन नसक्नुलाई हामीले सामान्य मान्नुपर्छ ।
अर्को कुरा, पत्रकार महासंघमा कुनै एउटा समूह मात्र विजयी भएको छैन । दुबै समूहबाट चुनाव लडेका साथीहरु निर्वाचित हुनुभएको छ । अध्यक्षको हकमा पनि निकटम प्रतिद्वन्द्वी सल्लाहकार हुने विधानमा व्यवस्था छ । तीर्थ कोइरालाजी निर्वाचनमा पराजित हुनुभएको होइन । बरु उहाँ सल्लाहकारमा निर्वाचित हुनुभएको छ । म अध्यक्षमा निर्वाचित भए तीर्थजी सल्लाहकारमा निर्वाचित हुनुभयो । हामी कसैले हारेका छैनौं ।
अर्को कुरा, निर्वाचनसम्म दुई समूह थिए । निर्वाचन सम्पन्न भएर परिणाम आइसकेपछि त्यो समूह भन्ने नै भत्किएको छ । अब म सबै नेपाली पत्रकारहरुको साझा अध्यक्ष हो । अब यो पक्ष र उ पक्ष भन्न जरुरी छैन । मैले मलाई मतदान गर्ने र मतदान नगर्ने सबैलाई समान रुपमा हेर्नेछु । पत्रकार महासंघलाई विगतमा भन्दा थप एकतावद्ध गर्न मेरो भूमिका रहने छ ।
सबै पत्रकारहरुको एकता नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । पत्रकारहरुको एकताबाट नै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ । पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाका लागि हामी सबै एक भएर लाग्न जरुरी छ । म सबै साथीहरुलाई पत्रकारहरुको हक अधिकारका लागि एक भएर लाग्न आह्वान गर्दछु ।
अर्को कुरा, पत्रकार महासंघमा मेरो एजेण्डा लागु गर्ने भन्ने होइन । २५ औं महाधिवशेनबाट साझा एजेण्डा पारित भएको छ । मैले काम गर्ने त्यही एजेण्डाको आधारमा हो । एजेण्डा साझा भइसकेपछि व्यक्ति गौण कुरा हो ।
पत्रकार महासंघलाई कुनै न कुनै रुपमा ठूला मिडियाले प्रभाव पार्छन् । महासंघ मालिक पत्रकारहरुको वरिपरि हुन्छ भन्ने आरोप छ नि ?
पत्रकार महासंघको विधानमा मिडियाका मालिकले सदस्यता पाउने व्यवस्था नै छैन । विधानमै मालिकहरुले सदस्यता पाउने व्यवस्था नभइसकेपछि उनीहरुको वरिपरि घुम्छ भन्ने कुरा गलत हो ।
अर्को कुरा, मोफसलमा साना मिडियाको सञ्चालक र श्रमजीवी आफै छन् । उनीहरुलाई हामीले श्रमजीवीअन्तर्गत नै बुझ्नुपर्छ । एउटै व्यक्ति पत्रिकाको सञ्चालक, सम्पादक र हकरसम्म छन् । उनीलाई मालिक भन्न त मिलेन नि ? मिडियाको सञ्चालक भए पनि दिन रात आफै खट्छ भने त्यो श्रमजीवी नै हो ।
म पनि साना मिडियाबाटै आएको व्यक्ति हो । मलाई साना मिडियाको पीडा राम्रोसँग थाहा छ । हामीले पत्रकारको हक अधिकारको कुरा गर्दा साना मिडियाको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्छ । साना मिडिया सञ्चालनको कुरा नउठाएर खाली श्रमजीवी मात्र भनेर सुगा रटान ग¥यौं भने ठिक ढंगले अघि बढ्न सक्दैनौं । त्यसैले हामीले श्रमजीवी पत्रकारको कुरासँगै साना मिडियाको प्रवद्र्धनको बारेमा आवाज उठाउन जरुरी छ ।
सरकारले निर्धारण गरेको श्रमजीवी पत्रकार ऐन अनुसार पत्रकारहरुले तलब तथा सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि पत्रकार महासंघले केही योजना बनाएको छैन ?
श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन हाम्रो कार्यकालको प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो । हामी तीन वर्षभित्र श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाउने छौं । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार अहिले पनि ५० प्रतिशत भन्दा बढी पत्रकारले नियुक्ति पत्र बिना काम गरिरहेका छन् । सेवा सुविधाको कुरा छाड्दिनुस् । उनीहरुलाई आफ्नो कामको कुनै आधिकारिक लिखित प्रमाण छैन ।
नियुक्ति पत्र बिना पत्रकारलाई काम लगाउनु एउटा अपराध नै हो । पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेर अपराध गर्ने छुट कसैलाई छैन । हामी त्यस्ता मिडिया सञ्चालकलाई कारवाहीका लागि नेपाल सरकारसमक्ष दबाब दिने छौं । अब सबै मिडिया हाउसले अनिवार्य रुपमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । पत्रकारहरुलाई न्यूनतम तलब तथा सेवा सुविधा दिनैपर्छ ।
पत्रकार महासंघ पत्रकारहरुकै हक हितका लागि बनेकाले हामीले यो मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाउने छौं । हामी सबै मिडिया सञ्चालकहरुलाई तत्काल श्रमजीवी पत्रकार ऐन निर्धारण गरेअनुसार नियुक्ति पत्र र न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधा लागु गर्न आग्रह गर्छौं । यदि पत्रकार महासंघको आग्रहलाई आलटाल गर्ने हो भने हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा जाने छौं । उनीहरुलाई कारवाहीका लागि सरकारलाई दबाबसमेत दिने छौं ।
राज्यको पुनःर्संरचना भइसकेको छ । अब पत्रकार महासंघको संगठनात्मक संरचना कस्तो हुन्छ ?
राज्यको मुल कानुन संविधानअनुसार मुलुक अहिले तीन तहमा विभाजन भएको छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र । अब पत्रकार महासंघ पनि राज्यको तह अनुसार नै पुनःर्संरचना गरिन्छ । जिल्ला तहलाई समन्वयात्मक बनाइन्छ । स्थानीय तहमा कम्तिमा १५ जना सदस्य भएकालाई नयाँ शाखा गठन गर्ने अनुमति दिइन्छ । १५ जना नपुगेको खण्डमा नजिकका अन्य स्थानीय तहलाई जोडेर समिति गठन हुन्छ । अहिले जिल्ला शाखाले प्रयोग गरेका सबै अधिकार स्थानीय तहमा गठन भएका शाखाहरुले प्रयोग गर्नेछन् । प्रदेश तहको पत्रकार महासंघले अहिले केन्द्रीय समतिले गर्दैै आएको सबै काम गर्नेछ । केन्द्रिय समितिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राष्ट्रिय एजेण्डा, दक्षता अभिवृद्धिका योजना लगायतका काम गर्ने छ ।
नेपाली पत्रकारहरुको अहिलेको मुख्य कार्यभार के हो ?
पत्रकार महासंघको मुख्य कार्यभार श्रमजीवी पत्रकार पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नु नै हो । सञ्चार माध्यम तथा पत्रकारहरुको गुणात्मक विकासका लागि उचित पहलकदमी लिनु हो । पत्रकारहरुको अहिलेको मुख्य कार्यभार भनेको पत्रकारितालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनु हो ।
अहिले नेपालमा मिडियाको संख्यात्मक विकास भएको छ । तर, अपेक्षाकृत रुपमा गुणात्मक विकास हुन सकेको छैन । मिडियाको विश्वसनियताको विषयमा अहिले समाजले औंला उठाइरहेको छ । पछिल्लो समय विकास भएका अनलाइनहरुको विषयमा पनि निकै टीकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन् । पत्रकारहरुले जे पनि लेख्छन् भन्ने समाजमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । अब पत्रकारहरुले आफ्नो पेशा र कामको बारेमा समीक्षा गर्न जरुरी छ । आफूलाई अझ निखारता लिदै विश्वसनीय समाचारका लागि लाग्नुपर्छ । समाजमा विश्वसनीय छवि ल्याउनको लागि पत्रकारले आफ्नो कामको समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
र, अन्त्यमा आम पत्रकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
म आम पत्रकार साथीहरुलाई एक भएर लाग्न आग्रह गर्दछु । पत्रकार महासंघ नेपालको निकै पूरानो लोकतान्त्रिक संस्था हो । लोकतन्त्रको लागि सबैभन्दा पहिले आवाज उठाउने संस्था नै पत्रकार महासंघ नै हो । पत्रकार महासंघले नेपालको आमुल परिवर्तनमा खेलको भूमिकालाई कसैले नर्कान सक्दैन । लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका लागि एकतावद्ध भएर लाग्न म पत्रकार साथीहरुलाई आग्रह गर्दछु ।
Prevउपमहानगरको असन्तुलित बजेट
Nextगाउँपालिका केन्द्रमै छैन टेलिफोन सेवा